Goolu Pulisic gbagoro n’ikpeazụ ka Chelsea meriri West Ham ndị isi ike – Carinsurancegeeks
by Promise Foster · April 30, 2022
Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ nke Christian Pulisic mere ka akwara anọ nke Chelsea dajụọ na mmeri 1-0 meriri West Ham, ebe Burnley si na mpaghara mgbada Premier League rịgoro na 1-0 meriri Wolves na Sọnde.
Nlebara anya na egwuregwu ndị mbụ dị na agbụrụ anọ kachasị elu na ọgụ mgbada, Liverpool na-atụ anya ibelata ọdịiche dị na ndị isi Manchester City na otu isi site na mmeri megide Merseyside rival Everton mgbe e mesịrị na Sunday.
Mgbe Lukasz Fabianski zọpụtara penariti Jorginho na nkeji ikpeazụ na Stamford Bridge, ndị otu Thomas Tuchel yiri ka ha na-aga n’ihu nhụsianya ọzọ na ala ụlọ.
N’aka nke ọzọ, Pulisic si n’ọnọdụ ahụ pụta iji kpalie Chelsea , na-etinye ha isi asaa karịa Tottenham nọ n’ọkwa ise n’ọsọ maka njedebe nke anọ kachasị elu na ebe na-esote Champions League.
Chelsea emeriela egwuregwu atọ n’usoro na Stamford Bridge na nke mbụ kemgbe 1993, ka ha meriri Arsenal 4-2 na Wednesde.
Tuchel kwuru na ya enweghị “ihe ngwọta” maka agbachitere “na-adịghị ike” nke Chelsea, nke nyere ihe mgbaru ọsọ 11 n’ime egwuregwu atọ ha gara aga.
Tuchel mere mgbanwe atọ site na egwuregwu Arsenal, Thiago Silva na-ewere ọnọdụ Malang Sarr na nchekwa nke Chelsea.
Azụ azụ Chelsea adịla nke siri ike, goolu ikpeazụ Pulisic kwesịrị ime ka ha nọrọ n’ọkwa anọ.
Declan Rice, Jarrod Bowen na Michail Antonio hapụrụ n’oche site n’aka onye njikwa West Ham David Moyes, bụ onye butere ụzọ egwuregwu mbụ nke European ọkara ikpeazụ kemgbe 1976, megide Eintracht Frankfurt na Europa League na Thursday.
Ndị na-akwado West Ham na-abụ abụ “kpọmkwem dị ka oge ochie, ọ nweghị onye nọ ebe a” n’ịtụ aka n’oche ndị nwere ohere n’akụkụ àkwà mmiri n’ihi mmachi tiketi amachibidoro dịka akụkụ nke mmachi megide onye nwe Chelsea Roman Abramovich.
Ndị Chelsea na-ekpo ọkụ karịa ka ha mechara ezumike ka ha kwụsịrị na ọkara mbụ. Agbanyeghị na Pulisic mere ihe dị iche mgbe nkeji iri itoolu gachara.
Mbọ N’Golo Kante gbaghaara bụ Fabianski jidere, bụ onye gbadara n’aka ekpe ya ka ọ kwapụ rọketi ogologo Trevoh Chalobah.
Timo Werner bịarutere nso ugboro abụọ, na-agbapụ n’akụkụ ụgbụ ahụ tupu ọ gbatịa iji duzie mbọ ya ozugbo na Fabianski.
Silva lepụrụ isi n’isi n’akụkụ Romelu Lukaku na nkeji 87th nke mere Craig Dawson nyefere penariti maka ọkpụkpụ ọ nọchiri anya ya.
Mgbe nlele VAR gasịrị, a chụpụrụ Dawson, mana West Ham gbanarị ntaramahụhụ ọzọ mgbe Fabianski zọpụtara obere ntụpọ Jorginho.
N’aka nke ọzọ, Pulisic gbanahụrụ Jorginho nhụsianya na nkeji 90, mgbe ọ zutere obe Marcos Alonso site na yadi 10 na-egbuke egbuke.
Ọkpụ nke abụọ nke Matej Vydra buliri Burnley n’ọkwa iri na asaa, na-eme ka olile anya ha nwere ịlọghachite dị egwu.
Onye njikwa nwa oge Burnley Mike Jackson ewerela isi asaa n’ime egwuregwu atọ kemgbe nchụpụrụ Sean Dyche dị egwu mgbe afọ iri gachara.
Vydra amachibidoro goolu maka offside na ọkara nke abụọ, mana ọ echereghị ogologo oge iji ṅụrịa ọṅụ mgbe ọ gbatara na nkeji 62 site na nso nso ka Wout Weghorst gafere.
Burnley jiri isi abụọ gafee Everton, bụ ndị nwere egwuregwu abụọ n’aka ma na-egwubeghị na Premier League kemgbe 1954.
Southampton lụrụ ọgụ site na ọkpụ goolu abụọ wee dọta 2-2 megide Brighton n’ihi ọkpụ abụọ nke James Ward-Prowse.
Ka obere nkeji abụọ gachara, Danny Welbeck jiri mgba dị nso tinye Brighton n’ihu, mgbe ahụ Mohammed Salisu tụpụrụ obe Leandro Trossard n’ime neetị nke ya maka goolu nke nkeji iri anọ na anọ.
N’ọkara nke ọkara, Ward-Prowse jiri free kick nke Premier League nke iri na anọ na-aga nke ọma wepụrụ ụkọ ahụ, naanị anọ dị mkpụmkpụ nke ndekọ David Beckham.
Ọ kụkwara ọzọ nkeji itoolu ka e mesịrị, oge a site na nsọtụ mpaghara ahụ na njedebe ụlọ ọgwụ.
UK nwụchiri nwaafọ Naijiria maka ịkpa ike na Naịjirịa
Previous story Rudiger ga-ahapụ Chelsea na njedebe nke oge